Fihanaky ny valanaretina :: Olona vaovao 128 nifindran’ny Covid-19 tao anatin’ny telo andro • AoRaha
Mihazakazaka tsy misy toy izany ny fiakaran’ny tarehimarika momba ny tsimok’aretina « Covid-19 » eto Madagasikara, tamin’iny faran’ny herinandro nankalazana ny fetin’ny Pentekôsta iny. Olona valo amby roapolo amby zato no indray voamarina fa voan’ny valanaretina tao anatin’ny telo andro monja, nanomboka tamin’ny sabotsy hatramin’ny omaly. Enina ny fitambaran’ny matin’ny valanaretina.
« Tafakatra enina amby roapolo sy valonjato ireo voatily ho mitondra ny tsimok’aretina Covid-19, amin’izao fotoana izao. Efatra amby fitopolo amby zato ny marary sitrana. Mahatratra enina amby efapolo sy eninjato kosa ireo manohy ny fitsaboana. Misy marary valo no arahi-maso akaiky », araka ny tatitry ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialin’ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny « Covid-19 », omaly tolakandro.
Vehivavy, 32 taona, no fahaenina matin’ny valanaretina tao amin’ny hopitaly Morafeno tany Toamasina, tamin’ny zoma alina ary notaterina tamin’ny sabotsy lasa teo. Tazo mahery no voalaza fa nampidirana hopitaly azy, nanomboka tamin’ny 24 mey lasa teo. Tamin’ny 25 mey 2020 no nivaly ny fitiliana nanamarina ny fitondrany ny tsimok’aretina « Covid-19 ».
Singanina tamin’ireo tanàna nonenan’ireo olona vaovao voatily fa voan’ny valanaretina koa ny eny Ambatomirahavavy, Soavinandriana, Beravina Itaosy, Alakamisy Fenoarivo, Ambatomaro, Ampitatafika, Manjakaray, Vontovorona, Antsahavory Alakamisy ary Arivonimamo. Niampy ihany koa ny any Fenoarivo Atsinanana, Taolagnaro hatrany Toliara sy Moramanga ary Ambatovy.
Ankoatra ny fandefasana andian-tafika misahana manokana ny fifehezana ny valanaretina tany Toamasina, dia nisy ny fanampiana ivontoerana vaovao handraisana an’ireo olona hahatiliana ny Covid-19: ny Ivon-toerampanofanana ara-teknika momba ny fambolena (CEFTAR) Analamalotra izay mahazaka olona manodidina ny roanjato. Ireo marary tsy misy soritr’aretina no havantana ao amin’ity toerana ity.
Homanina handraisana ireo marary ahitana soritr’ aretina ihany koa ny Hopitaly be Analakininina, amin’izao fotoana izao, toerana izay kendrena hahazaka marary eo amin’ny enimpolo.
Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, nandritra ny fandaharana manokana tamin’ny onjam-peo sy fahitalavitra, afak’omaly alina, ny firosoan’i Madagasikara amin’ny fenitra fahatelo amin’ ny fikarohana ny fanafody fitsaboana ny valanaretina, ankehitriny. « Afaka roa herinandro no hanombohantsika ny fampiasana ny ranom-panafody hatsindrona, izay hiarahana manatanteraka amin’ny laboratoara any Etazonia. Hiitatra hatrany Afrika ny andrana ka hanara-maso izany any amin’ireo firenen-kafa ihany koa ireo manam-pahaizana Malagasy » , hoy izy.
Nohazavainy koa fa isan’ny singa ao anatin’io ranom-panafody vaovao io ny zava-maniry « Artemisia ». Manohy ny fikarohana momba izany ireo mpikaroka malagasy sy Maorisiana sy Tailandey. Fantatra fa ho am-perinasa, tsy ho ela, ihany koa ireo laboratoara fanaovana fitiliana ao Toamasina sy eto Antananarivo.
Taratasin’ny fiarakodia :: Be mpitaky ny fanokafana ny foibe CIM Ambohidahy